I-Beddit, iliso lokujonga obukujongile | IPhone iindaba
I-Beddit, iliso lokulala obulikhangela
Ukujonga ukulala sesinye sezona zixhobo zishushu kwezempilo kumaxesha akutshanje. Izifundo zesayensi zixhasa ukuba ukulala kakuhle kubalulekile ukuze usebenze kakuhle emini, ukongeza ekuncedeni ukuphucula impilo yethu. Kwaye ngaphakathi kwale fashoni, ezinxibekayo, ezo zixhobo sihlala sizinxiba, ziye zaba yinto ebalulekileyo kule nto. Kukho izicelo ezininzi ezinceda ukujonga ukulala kwethu, okanye ubuncinci ukuthembisa oko, kodwa ukusikelwa umda kwezo zixhobo zincinci sinxiba esihlahleni sethu kuthintela loo milinganiselo yenziwe ukuba ibe luncedo kakhulu kwiimeko ezininzi. U-Beddit, nangona kunjalo, uthembisa ukuwufezekisa lo mbulelo kwinto yokuba inzwa yayo ayikho kuyo nayiphi na into enxibekayo, kodwa uyibeke ebhedini, kodwa emva koko isebenzisa izivamvo zeApple Watch yethu ukwandisa ulwazi.
IBeddit inezicelo ze-iPhone kunye neApple Watch, eyokugqibela ehlengahlengiswe kwi-watchOS 2 ngenxa yoko ekubeni eyinzalelwane inofikelelo kwiimvakalelo zewotshi yethu. Isithsaba singasetyenziselwa ukuskrolela kwiimenyu zesicelo, kwaye sinokufikelela kulwazi oluqokelelwe ngenqanaba lentliziyo kunye neeshukumisi zentshukumo. Kodwa ungayifumana njani imilinganiselo ethembekileyo ukuba iwotshi kufuneka ihlawuliswe ebusuku? Ndiyabulela kwisenzi esona sikhulu seBeddit sisezantsi nje kwethu xa silele, phantsi kweengubo.
Umlindo wethu uya kubeka esweni imisebenzi yethu yemihla ngemihla, ukuqokelela idatha xa sithatha ubuthongo emva kokutya, kwaye dlulisela loo datha kwi-app yezeMpilo, ethi iBeddit ihambelane ngokupheleleyo. Ebusuku sinokushiya iApple Watch ephethe ukuba inzwa ebekwe phantsi kwamashiti iya kuwenza wonke umsebenzi. IBeddit sele ithengisiwe kuyo ivenkile esemthethweni I-149 ye- € kwaye izicelo zayo ziyafumaneka kwi-iPhone kunye neApple Bukela simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Beddit, iliso lokulala obulikhangela
Uyidlulisela njani idatha yakho yezeMpilo kwi-iPhone entsha ngaphandle kokubuyisela
I-Premium One W3, isiseko esinye kuzo zonke izixhobo zakho